CODE MUNICIPAL D’ HYGIENE
ORGANIGRAMME DE LA CUA
Code Municipal d’Hygiène
INFO – TRAFFIC
MANUEL DOLEANCES CBGLCC
TOROLALANA AMPIHARANA NY FEHEZAM-PITSIPIKA
HO AN’NY FIKOLOAM-PAHASALAMANA
ETO AMIN’NY KOMININA ANTANANARIVO RENIVOHITRA
Araka ny Didim-pitondrana lah.826/13 tamin’ny 27 Aogositra 2013, notovanana sy nasiam-panovana araka ny Didim-pitondrana lah. 219/20 tamin’ny 12 Martsa 2020 sy lah. 260/20 tamin’ny 25 May 2020
Tsy fahadiovan’ny trano fonenana sy ny miankina aminy
-Paikady ampiharana ny lalàna
Fitsirihana eny an-toerana, Fampitandremana, Tatitry ny mpitsirika, Fandidiana handoa sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
-Ireo sazy ampiharina
Fanadiovana avy hatrany, sazy ara-bola Ar 50.000
9 andalana 1, 87 sy 89
-Ny voalazan’ny andinin-dalàna
ANDININY 9: Ny tompontrano na izay mipetraka ao aminy dia samy tompon’andraikitra feno amin’ny trano fonenany sy ny miankina aminy ary ny lalana manoloana azy.Tsy maintsy lokoina sy diovina ny trano, indray mandeha ao anatin’ny dimy taona fara-fahakeliny ary atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny fitsipika mifehy ny Tanàn-dehibe, indrindra ho an’ireo izay miorina amin’ny sisin’ny “avenue”, arabe mikodàna, lalana ary lalankely ampiasain’ny vahoaka.
Ny tsy fanatanterahana ny fepetra voalaza etsy ambony ao anaty fe-potoana voatondro dia mahatonga ny fandoavana ny sazy vonodina laharana faharoa ho an’ireo trano manamorona ny lalam-bahoaka sy ny fandoavana ny sazy vonodina laharana fahaefatra ho an’ireo trano manamorona ny araben’ny fahaleovantena miampy fanerena fampiharana didy ao anatin’ny fito (7)andro. Raha toa ka voalaza ho maloto ny trano iray aorian’ny fizahana ifotony ataon’ny manampahefana mahefa noho ny fangatahan’ny manodidina na noho ny iraka, ny Ben’ny tanàna dia afaka, na mandrara ny fonenana aminy, na mandidy ny tompony hanao asa fanadiovana na fandravana.
Andraikitr’izy ireo ihany koa ny manapaka ny tahon-kazo mihoatra ny faritry ny tanànany ka lasa any amin’ny tanàna mifanila na mitatao amin’ny lalana.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andiny 9 andl 1 sy andl 2, 10, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 89 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fanarian-drano avy amin’ny tafontrano eny an-dalambe na miteraka fanelingelenana ny hafa
Fitsirihana, fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro misy taratasy fanamarinana.
Sazy ara-dalàna Ar 300.000
59,87 sy 90
ANDININY 59: Voarara ny mamela ny fikorianan’ny rano mivantana avy amin’ny tafon-trano amin’ny lalam-bahoaka na amin’ny mpifanolobodirindrina. Ny ranonorana dia tsy maintsy akoriana amin’ny fantsom-pivoahana hatrany amin’ny fantsona akaiky indrindra aorian’ny fahazoana alalana mialoha avy amin’ny Ben’ny tanànan’ny Komina Antananarivo Renivohitra.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andiny 21, 23, 24, 25, 32, 33 andl 1, 39, 52, 54 andl 1, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ny didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo arahina fandraofana entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Tsy fanotofana ireo lavaka miteraka fiandronan’ny rano na fahasimban’ny fotodrafitr’asa, na tsy fikorianan’ny rano noho ny asa fanamboarana
Fidinana ifotony, fampitandremana am-bava mba hanatanteraka ny asa, fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Sazy ara-bola Ar 300.000
21, 87 sy 90
ANDININY 21: Ao anatin’ny trano naorina sy ireo miankina aminy, tokontany, zaridaina, kianja, ireo lavaka sy lempona amin’ny tany dia tsy maintsy tampenan’ny tompontrano.
Amin’ny tany misy fanorenana, ny tompontrano na ny mampiasa izany dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra mba ahafahan’ny rano rehetra mikoriana tsara sy mba hialàna amin’ny fiforonan’ny rano miandrona avy amin’ny orana, na fanasana na fanondrahana.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Tsy fanesorana ireo fanantazana tsy miasa sy ireo miankina aminy
Fampitandremana am-bava, fanatanterahana ny asa fanadiovana. Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Sazy ara-bola Ar 50.000
22, 87 sy 89
ANDININY 22: Izy ireo dia miandraikitra ny fanesorana ireo fanantazana tsy miasa na ny potik’ireo fanantazana, manodidina ny trano sy ny tokontany, ka mety hiteraka fiandronan’ny rano toy ny kapoaka efa foana, vakin-dovia, na tavoahangy.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2,10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34,35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79, amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy ara-pahasalamana ny trano fonenana
Fizahana ifotony, firaketana an-tsoratra ny maha tsy ara-pahasalamana ny trano. Fakan-kevitry ny komity Monisipaly misahana ny fikoloampahasalamana. Famoahana didim-pitondrana monisipaly mandidy ny fandravana na ny fanaovana asa fanadiovana sy fanamboarana ny trano.
Sazy ara-bola Ar 5.000.000 miampy fanerena hanatanteraka ny didy ao anatin’ny 7 andro.
9, 87 sy 92
ANDININY 9: Ny tompontrano na izay mipetraka ao aminy dia samy tompon’andraikitra feno amin’ny fahadiovan’ny trano fonenany sy ny miankina aminy ary ny lalana manoloana azy. Tsy maintsy lokoina sy diovina ny trano, indray mandeha aoa natin’ny dimy taona fara-fahakeliny ary atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny fitsipika mifehy ny Tanàn-dehibe, indrindra ho an’ireo izay miorina amin’ny sisin’ny arabe mikodàna, lalana ary lalankely ampiasain’ny vahoaka.
Ny tsy fanatanterahana ny fepetra voalaza etsy ambony ao anatin’ny fe-potoana voatondro dia mahatonga ny fandoavana ny sazy vonodina laharana faharoa ho an’ireo trano manamorona ny lalambahoaka sy ny fandoavana ny sazy vonodina laharana fahaefatra ho an’ireo trano manamorona ny araben’ny fahaleovantena miampy fanerena fampiharana didy ao anatin’ny fito (7) andro. Raha toa ka voalaza ho maloto ny trano iray aorian’ny fizahana ifotony ataon’ny manampahefana mahefa noho ny fangatahan’ny manodididna na noho ny iraka, ny Ben’ny tanàna dia afaka, na mandrara ny fonenana aminy, na mandidy ny tompony hanao asa fanadiovana na fandravana.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 9 andl 4, 15 andl 2, 20, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika ny fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Trano atahorana hitera-doza tampoka
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fanatanterahana ny asa fandravana ataon’ny Komina.
Fandravana ny sazy ara-bola Ar 5.000.000
63, 87 sy 92
ANDININY 63: Ny Ben’ny tanàna dia afaka mandidy ny fandrodanana trano fonenana na fotodrafitrasa manamorona ny lalambahoaka rehefa nahita ny fitanana an-tsoratra nataon’ny iraka manokana ho amin’izany izay nahita fototra fa ireo fanorenana ireo dia mety hianjera sy mety hitera-doza ho an’ny vahoaka.
Raha mety hampidi-doza tampoka, ny Ben’ny tanàna dia manendry teknisiana manam-pahaizana manokana handrafitra ao anatin’ny 24 ora ny tatitry ny toetoetry ny fotodrafitrasa. Raha manamafy ny mahamaika na ny fahavoazana lehibe sy tampoka mety haterak’izany ny tatitra, ny manampahefana mahefa dia mampilaza avy hatrany ny tompony ary manatanteraka avy hatrany ireo fepetra ilaina mba hitandroana ny filaminam-bahoaka. Ny tompony no miantoka ny tany rehetra amin’izany.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy 20, 15 andl 2, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Ny tsy fanarahan-dalàna maromaro amin’ny fotoana iray sy ny famerenankeloka dia mahatonga ny fampiharana avy hatrany ny sazy sokajy ambony.
Tsy fanapahana ny tahon-kazo mihoatra ny faritry ny tanànany
ka lasa any amin’ny tanàna mifanila na mitatao amin’ny lalana
-Paikady hampiharana ny lalàna
Fitsirihana eny ifotony, fampitandremana arahana fandidiana hanapaka ny hazo mihoatra ny fefy. Fitsirihana fanindroany hisavana ny fahatontosan’ny asa, fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro raha tsy efa ny fanapahana ny hazo.
9, 87 sy 89
ANDININY 9: Ny tompontrano na izay ao aminy dia samy tompon’andraikitra feno amin’ny fahadiovan’ny trano fonenany sy ny miankina aminy ary ny lalana manoloana azy.Tsy maintsy lokoina sy diovina ny trano, indray mandeha ao anatin’ny dimy taona fara-fahakeliny ary atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny fitsipika mifehy ny Tanàn-dehibe, indrindra ho an’ireo miorina amin’ny sisin’ny” avenue”, arabe mikodàna, lalana ary lalankely ampiasain’ny vahoaka.
Ny tsy fanatanterahana ny fepetra voalaza etsy ambony ao anatin’ny fe-potoana voatondro dia mahatonga ny fandoavana ny sazy vonodina laharana faharoa ho an’ireo manamorona ny lalambahoaka sy ny fandoavana ny sazy vonodina laharana fahaefatra ho an’ireo trano manamorona ny araben’ny fahaleovantena miampy fanerena fampiharana didy ao anatin’ny fito (7) andro. Raha voalaza hoe maloto ny trano iray aorian’ny fizahana ifotony ataon’ny manampahefana mahefa noho ny fangatahan’ny manodidina na noho ny iraka, ny Ben’ny tanàna dia afaka, na mandrara ny fonenana aminy, na mandidy ny tompony hanao asa fanadiovana na fandravana.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10,11, 15 andl 1, andl 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fanariana rano amin’ny lalandriaka tsy misy fahazoan-dalana
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Fitanana an-tsoratra, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
61, 87 sy 90
ANDININY 61: Ny fanariana ny rano avy amin’ny tanàna manamorona mankao anatin’ny lalandriaka ambanin’ny lalambahoaka dia tsy maintsy tarihina mivantana ka ny fitaovana sy ny fepetra amin’izany dia izay voalaza ao anatin’ny fahazoan-dalana.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21 , 23, 24 ,25, 32 ,33 andl 1, 39 , 52, 54 andl 1, 55 , 56 andl 1, 58 , 59, 60 ,61, 64, 66, 67, 68, 73, 74 , 75 , 84 85 , 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Tsy famelàna ny ranonorana ikoriana
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Fandidina handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
58, 87 sy 90
ANDININY 58: Ireo tanàna rehetra ambany lalana dia tsy maintsy mamela malalaka ny fikorianan’y rano, indrindra ny ranonorana.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21 ,23 , 24, 25, 32, 39, 52 , 55, 56 andl 1, 58 , 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Mikasika ireo tatatra eny anivon’ny Fokontany sy ny miankina aminy
Tatitra avy amin’ny BMH na fitsirihana ataon’ny mpanadihady ara-pahasalamana.
ANDININY 17: Ireo tompon’andraikitry ny Fokontany dia manara-maso ny fiasan’ny lakandrano fanariana rano maloto sy ny tsy hisian’ny rano miandrona na fako amin’ny lalankely ao amin’ny fari-piadidiany.
Tsy fahavitan’ny fandokoana sy ny fanadiovana ny trano indray mandeha ao anatin’ny dimy (5) taona
Fanomezana taratasy fandidiana ho amin’ny fandokoana, Fitsirihana hisavana ny fahavitan’izany, Fanomezana taratasy fandidiana ny hanaovana ny fandokoana ao anatin’ny (7 ) fito andro sy fanomezana taratasy handoavana ny sazy eny amin’ny toerana voatondro. Fanenjehana ady heloka eny amin’ny fitsarana.
Sazy ara-bola Ar 50.000 (ho an’ny trano manamorona ny lalam-bahoaka) ary Ar 1.000.000 (ho an’ny trano manamorona ny araben’ny fahaleovantena).
9 andl 2, 87, 89, 91
ANDININY 9: Ny tompontrano na izay mipetraka ao aminy dia samy tompon’andraikitra feno amin’ny fahadiovan’ny trano fonenany sy ny miankina aminy ary ny lalana manoloana azy. Tsy maintsy lokoina sy diovina ny trano, indray mandeha ao anatin’ny dimy taona fara-fahakeliny ary atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny fitsipika mifehy ny Tanàn-dehibe, indrindra ho an’ireo izay miorina amin’ny sisin’ny “avenue”, arabe mikodàna, lalana ary lalankely ampiasain’ny vahoaka.
Ny tsy fanatanterahana ny fepetra voalaza etsy ambony ao anatin’ny fe-potoana voatondro dia mahatonga ny fandoavana sazy vonodina laharana faharoa ho an’ireo trano manamorona ny lalam-bahoaka sy ny fandoavana ny sazy vonodina laharana fahaefatra ho an’ireo trano manamorona ny araben’ny fahaleovantena miampy fanerena fampiharana didy ao anatin’ny fito (7) andro. Raha toa ka voalaza ho maloto ny trano iray aorian’ny fizahana ifotony ataon’ny manampahefana mahefa noho ny fangatah’ny manodididna na noho ny iraka. Ny Ben’ny tanàna dia afaka, na mandrara ny fonenana aminy, na mandidy ny tompony hanao asa fanadiovana na fandravana.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22,27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
ANDININY 91: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 53 , 56 andl 2, 80, 81, 82 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy sokajy fahaefatra.
Mamany, mangery, mandrora, mandrehoka ary manipy fako eny amin’ny lalana, kianja, toerambahoaka.
Famerenanana amin’ny laoniny ny fahadiovana amin’ny fanadiovana na fandraofana miaraka amin’ny vava ny loto izay natao, na fandidiana handoa ny sazy ara-bola any amin’ny toerana voatondro misy taratasy fanamarinana.
31, 87 sy 89
ANDININY 31: Ny fanajana ny fahadiovana dia ady sy andraikitry ny tsirairay. Ny famaniana na fanipazana diky ivelan’ireo fotodrafitrasa natokana ho amin’izany, ny mandrehoka, ny mandrora amin’ny toerana rehetra, ny famelàna ny biby angeringery eny amin’ny lalana, dia voarara tanteraka, izay miteraka fanadiovana eo no ho eo ny toerana sy ny manodidina azy. Ny mpampiasa lalana, ny mpandalo ary ireo mpamily dia tompon’andraikitra ny amin’ny fitandroana ny fahadiovan’ny manodidina sy ny fitaterana manokana ny fitateram-bahoaka. Ny fanipazana fonosana na inona karazany amin’ny lalana, kianja na toeram-bahoaka dia mahatonga izay nanao izany ho sazy vonodina, ankoatra ny fanatanterahana ny sazy voalaza andalana etsy ambony izay mifototra amin’ny famerenana amin’ny laoniny ny fahadiovana.
ANDINY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fatoriana, fonenana na fanahazan-damba eny amin’ireo kianja na zaridaina sy toerana fivezivezena
Fampitandremana miampy fandidiana: Fanesorana, Fanangonana ny lamba, Fialàna, Fandoavana ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Sazy ara-bola Ar 5.000
68 andl 2, 69, 87 sy 88
ANDININY 68: Ireo lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy dia tsy azo ampiasaina ho an’ny tombotsoa manokana, toy ny trano garazy, fivarotana zavatra tonta na hilalaovana (babyfoot, billard), ny fanahazam-bary, ny fivarotana fasika sy vatokely ary koa ny fivarotana ireo fitaovana fanamboarana trano ka iharan’ny fandraofana ho an’ny tombotsoan’ny Komina raha toa ny sandan’ny entana nalain’ny Komina ka ambanin’ny sazy voafaritry ny andininy faha sivifolo (90). Amin’ny tranga mifanohitra amin’izany , ny mpandika lalàna dia didiana handoa ny sazy mifanaraka amin’izay voalazan’ny didy amam-pitsipika manankery.
Ny fanahazan-damba eny amin’ny lalam-bahoaka sy ny miankina aminy dia faizina amin’ny fanesorana miaraka amin’ny vava ireo lamba miampy fandoavana lamandy sokajy voalohany.
Ireo sakafo mora simba nogiazana dia hatolotra ireo hopitaly sy ireo mpanao asa soa.
Ny fanasana fiarakodia rehetra sy hafa amin’ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy dia voarara.
ANDININY 69: Voarara tanteraka ny fanaovana ny toeram-bahoaka, ny tsena, ny sisin-dalana, ny lavarangana na ny toerana rehetra tsy natokana ho amin’izany, ho fonenana na fatoriana.
Na izany aza, ity fepetra ity dia tsy mihatra amin’ireo mpamokatra, nahazo alalana avy amin’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra araka izay fepetra voalazan’ity Fehezam-pitsipika ity.
ANDININY 88: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 14, 68 andl 2, 69, 83 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy voalohany taorian’ny fampitandremana am-bava hiala avy amin’ny toerana na hanajanona ny tsy fanarahan-dalàna.
Fanipazana rano avy eny am-baravarankely mankeny amin’ny lalam-bahoaka, anaty tatatra, farihy na fametrahan ireo karazam-pako amin’ny sisiny
Fitanana an-tsoratra sy fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
19, 87 sy 89
ANDININY 19: Voarara tanteraka ny manipy rano maloto avy eny am-baravarankely na ny manary izany eny amin’ny lalam-bahaoaka.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fametrahana kombarika sy fitaovana fanaovana fanorenana eny amin’ny lalam-bahoaka tsy nahazoana alalana
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana sy Fandidiana mba hanala izany avy hatrany. Tatitra an-tsoratra, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Fandraofana ny akora.
64, 87 sy 90
ANDININY 64: Voarara ny mametraka amin’ny lalam-bahoaka sy ny miankina aminy, toerana na trano fiasana ho famatsiana sy hikarakarana fitaovana amin’ny fanorenana toy ny fasika, vato kilonjy, vatokely, na ny mametraka korotan-javatra, poti-javatra avy amin’ny fandravan, raha tsy nahazoana alalana mialoha avy amin’ny Ben’ny tanànan’ny Kaomina Antananarivo Renivohitra.
Ireo mpandraharaha nahazo alalana dia tsy mahazo manao kombarika sy rafi-kazo raha tsy nandray ny fepetra manokana mba hiantohana ny fahamafisan’ny kombarika sy rafi-kazo, ny tsy hianjeran’ny fitaovana sy vatokely araka izay voalazan’ny andalana teo aloha ary ny tsy hanakorontanana ny filaminana sy fizotran’ny fifamoivozana amin’ny lalam-bahoaka.
ANDININY 65: Ny fahazoan-dalana hampiasa ny lalam-bahoaka, hametraka toeram-piasana sy kombarika manamorona izany lalana izany, mba hanatanteraka ireo asa dia mifanaraka amin’ireo famelan’ny tompon’andraikitry ny fanadiovana, izay tokony hanaovana fangatahana mialoha. Amin’ny tranga rehetra, ny fampiasana ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy dia tsy tokony hihoatra ny 48 ora.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 33 andl 1, 39, 52, 54 andl 1, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fametrahana ny tany noloarana eny amin’ny toerana fivezivezen’ny besinimaro, tsy fametahana marika manokana ahafantarana izany, tsy fanadiovana ny toerana nampiasaina.
Fampitandremana miampy fandidiana hanala ny fitaovana sy ny ranontany, misy fitanana an-tsoratra, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Raha tsy manatanteraka ireo voalaza ireo ny nahazo alalana dia ny Komina no manala azy.
Fanalana avy hatrany ny ranontany
66, 87 sy 90
ANDININY 66: Ilay nahazo alalana dia tsy maintsy manala avy hatrany aorian’ny fahavitan’ny ampahan’asa ireo tany noloarana mba hampahalalaka tsy misy fahatarana ny fampiasana ny lalam-bahoaka. Ny Komina dia afaka manala an-tery ranontany ary dia afaka mitaky fanomezan-tanana avy amin’ny mpitandro ny filaminana raha toa ka hitany ny ilàna izany.
Ireo faritra anaovana ny asa ireo dia tokony hofefena hatrany amin’ny hazo sy tady na fitaovana hafa mitovy aminy nahazoana alalana.
Tokony hapetraka ho hita tsara manoloana ny toerana hanaovana asa sy fitahirizan’entana amin’ny lalam-bahoaka ny takelaka fampahafantarana na zavatra mamiratra.
Ny Komina Antananarivo Renivohitra ihany koa, dia afaka mametraka, na mandidy, raha hitany fa ilaina izany, ny fiambenan’ny olona mpiandry ireo toerana hanaovana asa izay ny mpiantok’asa no mandoa ny sarany.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 33 andl 1,39, 52, 54 andl 1, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fanimbana fotodrafitrasa toy ny fantsona fitarihan-drano tsy nisy alalana manokana
Fitsirihana ifotony, fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Famerenana amin’ny laoniny na fitoriana eo anivon’ny fitsarana mahefa.
67, 87 sy 90
ANDININY 67: Tsy misy afaka manimba ireo fotodrafitrasa isan-karazany toy ny fantsona, fitarihana efa napetrak na nataon’ireo andrim-panjakana isan-tsokajiny, na nataon’ny olon-tsotra, raha tsy nahazo alalana manokana avy tamin’ny Ben’ny tanànan’ny Komina Antananarivo Renivohitra. Tsy maintsy haverina amin’ny laoniny ireo simban’ny asa natao.
Ny Komina Antananarivo Renivohitra dia malalaka amin’ny fampiharana ny fanamboarana ireo fotodrafitrasany araka ny fitaovana ananany ka haloan’ilay nahazo alalana ny lany amin’izany.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazann’y andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 21, 64, 65, 66, 66, 67, 68,73, 74,75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fandavahana lalana hampidirana fantsona sy tsy famerenana izany amin’ny laoniny
Fidinana ifotony sy fizahana ny taratasy fahazoan-dalana, Fampitandremana am-bava, Fitanana an-tsoratra, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Asa famerenana amin’ny laoniny.
60, 87 sy 90
-Ny voalazan’y andinin-dalàna
ANDININY 60: Ny fametrahana amin’ny lalana ireo fitarihana mba hikorianana sy hitsinjarana ny rano, dia tsy maintsy ahazoana alalàna mialoha avy amin’ny Ben’ny tanànan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Ny fahazoan-dalana no mamaritra ireo fepetra hanatanterahana ny asa, indrindra ny fanokafana ireo tatatra, ny tsy maintsy hamerenana amin’ny laoniny ny lalana. Ny fantsona fitsinjarana rano dia alevina farafahakeliny amin’ny 0,70 m ambanin’ny tany.
Aorian’ny asa famerenana amin’ny laoniny atilalana izay ataon’ny mpangataka, Kaomina dia manatanteraka fanamarinana ifotony ary afaka mitaky fepetra manokana raha ilaina.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 21, 23, 24, 25, 32, 33 andl 1, 39, 52, 54 andl 1, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fampiasana fitaovana miteraka hovitra tsy nahazoana alalana
-Paikady ampihrana ny lalàna
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
73, 87 sy 90
ANDININY 73: Ny fampiasana zavatra na fitaovana, isan-karazany, mety hiteraka feo na hovitra mafy dia mila fahazoan-dalana avy amin’ny Sampan-draharaha monisipaly ankoatra ireo didy aman-dalàna hafa.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fanaovana varotra ivelan’ny toerana natokana ataon’ny mpamokatra sy ny mpiantoka, Varotra voankazo manta akaiky sekoly, Varotra trondro lena ivelan’ny toerana nahazoan-dalana
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fandraofana avy hatrany ny entam-barotra tsy ara-dalàna.
34, 87 sy 89
-Ny voalazann’y andinin-dalàna
ANDININY 34: Voarara ny fanaovana varotra na inona na inona sokajiny ivelan’ny toerana natokana ho amin’izany.
Ireo toerana rehetra natokana ho an’ny tsena dia tsy maintsy anaovana fanadiovana faobe, fiarovana amin’ny otrik’aretina ary famonoana bibikely ara-potoana izay ataon’ny sampan-draharahan’ny fitandroana ny fahasalamana.
Ireo mpamokatra sy mpiantoka dia manana adidy tsy hivarotra afa-tsy ireo entam-barotra sy vokatra fihinana ara-pahasalamana sy azo amidy raha tsy izany dia ho raofina sy ho potehina avy hatrany izay tsy anrahana fombafomba hafa. Voarara tanteraka ny fivarotana voankazo manta eo amin’ny faritra manakaiky sekoly amin’ny faritry ny Komina Antananarivo Renivohitra. Voarara avokoa ny fivarotana trondro lena sy sakafo manta ivelan’ny toerana nahazoan-dalana.
ANDININY 89: Ny tsy fanrahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34,35, 36, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’iyt didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Varotra tsy ambony akalana
Fampitandremana am-bava ataon’ny mpiasan’ny tsena, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fandraofana ny entam-barotra.
43, 87 sy 89
ANDININY 43: Ny varotra rehetra dia tsy maintsy ambony akalana miala 70 sm amin’ny tany. Ny tsy fanajana ny fepetra voalazan’ity toko ity dia mahatonga izay nanao izany iharan’ireo sazy vonodina voalazann’ity Fehezam-pitsipika ity.
Ireo sazy vonodina voalazan’ity didim-pitondrana ity dia azo ampiharina aorian’ny fampitandremana tsy nisy vokany ankoatra ny tsy maintsy handraofana ny entam-barotra.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 adnl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1,16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy faharoa.
Fivarotana sy fikirakirana vokatra na zavatra miteraka vovoka tsy anaty lasaka ary tsy misy fahazoan-dalana
Fidinana eny an-toerana sy fandraketana an-tsoratra ny zava-misy, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro misy taratasy fanamarinana.
Fanidiana avy hatrany ny toeram-pivarotana, fandraofana ny entana ary fandoavana ny sazy ara-bola Ar 50.000
33 andl 5, 87 sy 89
ANDININY 33: Ny fanodinana ireo akora mamoaka setroka na ny fivarotana vokatra miteraka vovoka noho ny fikirakirana azy izay mandoto ny tontolo iainan’ny trano manodidina dia tsy maintsy manana fahazoan-dalana miorina eo an-toerana ialohavan’ny fanadihadihana.
Ny mpivarotra dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra mba hiarovana ny fihanaky ny vovoka avy amin’ ireo entam-barotra ireo. Ny fanaovana azy anaty kitapo na kitapokely dia tsy maintsy atao.
Ny tompon’ny orinasa na mpivarotra ireo akora mety hitera-bovoka ireo dia tompon’andraikitra feno amin’ny fahavoazana avy amin’ny fandotoana sy fanimbana ny tontolo iainana, vokatry ny fielezan’ny vovoka sy ireo akora samihafa mitera-doza avy amin’ny asa famokarana sahanin’izy ireo.
Ny fandikana ireo fepetra ireo dia mahatonga ny mpivarotra iharan’ny fanakatonana avy hatrany ny asa ataony na ny toeram-pivarotana ankoatra ny sazy vonodina voalazan’ity didim-pitondrana ity.
Ho an’ny orinasa na ozinina, ivelan’ny fandovana sazy fahadimy dia mety hisy ny fandidina fikatonana vonjimaika ary mifarana izany rehetra izany rehefa hita ny fanatanterahana ny fepetra notakian’ny Komina.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 57 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy fanariana ny fako ara-potoana, ary tsy fanajana ny ora fisokafana sy fikatonan’ny tsena
42, 87 sy 89
-Ny- voalazan’ny anidinin-dalàna
ANDININY 42: Ny mpivarotra isan-karazany rehetra dia tsy maintsy manana kifafa sy fanariam-pako tsirairay avy izay hametrahany ireo fako rehetra noho ny fanatanterahany ny asany. Ny fanariana izany fako sy karazam-pako izany anaty toerana iombonana dia tsy maintsy hataon’ireo mpivarotra ihany, manomboka amin’ny 5 ora hariva mandrapikatonan’ny tsena. Ny mpivarotra tsirairay dia didiana hanaja ny ora fisokafan’ny tsena manomboka amin’ny 6 ora maraina sy ny ora fikatonan’ny tsena amin’ny 6 ora hariva.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42,43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fitsirihana ifotony, fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidina handoa sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
56 andl 1, 87 sy 90
ANDININY 56 andl 1: Voarara ny fivarotana entana na zavatra hafa rehetra ivelan’ny toerana voatokana na nahazoana alalàna avy amin’ny manampahefana mahefa, indrindra amin’ny sisin-dalana sy ny lalam-bahoaka izay mety hiteraka sakana amin’ny fivezivezen’ny olona sy ny fiarakodia.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55,56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Mamatsy entam-barotra ireo mpivarotra amoron-dalana
Fitsirihana itofony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Sazy ara-bola Ar 1.000.000
56 andl 2, 87 sy 91
ANDININY 56 andl 2: Ny mpivarotra ary koa ny mpamatsy entam-barotra izay amidy eny amin’ny toerana vaorara araka ny andalana eo aloha dia omena sazy famaizana araka ny andininy faha sivifolo (90) ho an’ny mpivarotra ary araka ny andininy faha iraika ambisivifolo (91) ho an’ny mpamatsy.
ANDININY 91: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 53, 56 andl 2, 80, 81, 82 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy fahaefatra.
Fivarotana sy fanapoahana tsipoapoaka
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Famerenana amin’ny laoniny ny fahavoazana mahazo ny hafa.
82, 87 sy 91
ANDININY 82: Ny fanapoahana tsipoapoaka na zavatra hafa manjelatra amin’ny fotoana isan-karazany sy ny fivarotana na fitsinjarana izany entana izany dia ilàna fahazoan-dalana avy amin’ny Ben’ny tanànan’ny Komina Renivohitra na ny olona nomeny fahefana ho amin’izany ankoatra izay takian’ireo didy aman-dalàna hafa.
Na dia izany aza, ny fivarotana tsipoapoaka sy zavatra manjelatra sia voarara ho an’ny zatovo latsaky ny 16 taona.
Ny fandikana izany fepetra izany dia miteraka fandraofana izany entana izany ary mahatonga ilay mpitana azy ho voasazy handoa vonodina voalazan’ity Fehezam-pitsikpika ity ankoatra ny famerenana amin’ny laoniny ireo fahasimbana nateraky ny fipoahana tamin’ity mpifanolo-bodirindrina.
ANDININY 91: Ny fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 53, 56 andl 2, 80, 81, 82 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy fahaefatra.
Varotra hanimasaka ivelan’ny toerana voatokana ao anaty tsena
-Paik’ady ampiharana ny lalàna
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fandraofana avy hatrany ny entam-barotra tsy ara-dalàna.
35, 87 sy 89
ANDININY 35: Hentitra ny fandraràna ny fivarotana hani-masaka ivelan’ny toerana voatokana sy noajariana manokana ho amin’izany ao anatin’ny tsena. Ny tsy fanajana io lamina io dia mitarika fandraofana avy hatrany sy ny fanapotehana ireo entana aorian’ny fitanana an-tsoratra ataon’ny mpanenjika ny fandikan-dalàna.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Varotra hanimasaka tsy manaraka ny fenitry ny fahadiovana
–Ireo sazy ampiharina
ANDININY 36: Ny varotra hanimasaka sy sakafo fihinana dia tokony anaty vata fitaratra mihidy tsara izay tsy tafiditry ny bibikely na ny vovoka. Tsy maintsy ampiasaina fonon-tanana, na raha tsy misy dia fitaovana voatokana handraisana ireo sakafo amidy.
Tokony manana rano, na tahirin-drano fisotro madio avokoa ny fivarotana hanimasaka rehetra.
Fampiasana afo kitay amin’ny varotra hanimasaka; ary tsy fanadiovana ny toerana alohan’ny hikatonana
Tatitra an-tsoratra, fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
-Ireo sazy ampiaharina
38, 87 sy 89
ANDININY 38: Voarara ny fampiasana kitay amin’ny varotra hanimasaka. Ny mpivarotra tsirairay dia tsy maintsy mandray fepetra mba ahatonga ny fatana gazy na afonarina tsy hanelingelenana ny fivezivezen’ny mpandeha an-tongotra. Tokony hamboariny ny toerana mba ahazoany mampiasa fatana mandeha amin’ny gazy na arina.
Ny toerana nomena ireo mpivarotra hanimasaka dia tsy maintsy sasany sy dioviny alohan’ny hikatonany. Aorian’ny fikatokanana, dia voarara ny fidirana ao anatin’izany na dia ho an’ny mpivarotra aza.
Tsy fananana fanamarinana ara-pahasalamana ahafahana manao asa fivarotana hanimasaka
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fisintonana avy hatrany ny fahazoan-dalana hivarotra.
44, 87 sy 89
ANDININY 44: Ny mpivarotra hanimasaka sy sakafo dia tsy maintsy manao fizaham-pahasalamana isan-taona mba ahafahany manao ny asa. ny fanamarinana avy amin’ny dokotera ny amin’ny fahafahana mivarotra dia tokony hita mandrakariva eny amin’ny toeram-pivarotana. Ny tsy fanatanterahana izany dia mitarika fampiatoana na fisintonana avy hatrany ny fahazoan-dalana izay tsy misakana ny fampiharana ny sazy vonodina voalaza.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fivarotana zava-pisotro misy alikaola amin’ny toerana voarara
–-Paikady ampiharana ny lalàna
54 andl 1, 87 SY 89
ANDININY 54 andl 1: Ankoatra ireo toerana voatokana, dia voarara tanteraka ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola izay mitarika fanasaziana vonodiana sokajy faharoa amin’ity didim-pitondrana ity.
Famatsiana zava-pisotro misy alikaola ireo mpivarotra izany amin’ity toerana voarara
Sazy ara-bola Ar 5.000.000
54 andl 2, 87 sy 92
ANDININY 54 andl 2: Ireo mpamatsy zava-pisotro misy alikaola ho an’ireo mpivarotra tsy ara-dalàna izay voalazan’ny andalana eo ambony dia saziana amin’ny fandoavana lamandy sokajy fahadimy ankaotra ny fanenjehana azy ara-panjakana, ady madio, ady heloka izay voalazann’y fehezan-dalàna mifehy ny hetra ary ny lalàna manankery mifehy ny zava-pisotro misy alikaola.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha9 andl 4, 15 andl 2, 20, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sokajy fahadimy.
Tsy fanajana ny ora fisokafana sy fikatonan’ny trano fivarotana toaka.
–Paikady ampiharana ny lalàna
–Ireo sazy ampiaharina
55, 87 sy 90
ANDININY 55: Ao anatin’ny faritry ny Komina Antananarivo Renivohitra, ny ora fisokafana sy fikatonan’ny mpamatsy zava-pisotro misy alikaola amidy, hosotroina eo an-toerana na ho entina dia voafetra araka izao manaraka izao:
-Fisokafana: amin’ny enina (6) ora maraiana
-Fikatonana: amin’ny sivy (9) ora alina
Io fepetra io dia tsy mihatra amin’ny :
-Tranom-bahiny, trano fisakafoana sy trano fandihizana;
-Toeram-pivoriana sy trano filanonam-bahoaka, an’ny miaramila na olon-tsotra izay efa matetika mikarakara hetsika na fety nahazoana alalana ara-dalàna avy amin’ny Ben’ny tanànan’ny Komina Antananarivo Renivohitra.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74,75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fanodinana akora mamoaka setroka sy mitera-bovoka ataon’ny orinasa
33 andl 6, 87 sy 92
ANDININY 33: Ny fanodinana ireo akora mamoaka setroka na ny fivarotana vokatra miteraka vovoka noho ny fikirakiranana azy izay mandoto ny tontolo iainan’ny trano manodidina dia tsy maintsy manana fahazoan-dalana miorina eo an-toerana ialohavan’ny fanadihadiana. Ny mpivarotra dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra mba hiarovana ny fihanaky ny vovoka avy amin’ny fikirakirana ireo entam-barotra ireo. Ny fanaovana azy anaty kitapo na kitapokely dia tsy maintsy hatao.
Ho an’ny orinasa na ozinina , ivelan’ny fandoavana sazy sokajy fahadimy dia mety hisy ny fandidiana fikatonana vonjimaika ary mifarana izany rehefa hita ny fanatanterahana ny fepetra notakian’ny Komina.
ANDININY 92: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 15, 15 andl 2, 250, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Fandoroana fakonkanina, fandrendrehana tara, fandorona biriky tsy nahazoana alalana.
15 andl 2, 87 sy 92
ANDININY 15 andl 2: Ny fandoroana biriky, fakonkanina, fandrendrehana tara dia voarara raha tsy misy fahazoan-dalana avy amin’ny Komina Antananarivo Renivohitra izay manaraka ny taridalana sy fenitra avy amin’ny Ministeran’ny Tontolo iainana.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 9 andl 4, 15 andl 2, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana tiy dia mitarika fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Tsy fanajanonana asa miteraka hovitra na feo mafy eo anelanelan’ny amin’ny 9 ora alina hatramin’ny 5 ora maraina na ny alahady tontolo andro
74, 75, 87 sy 90
ANDININY 74: Ny olona rehetra mampiasa amin’ny sehatry ny asa aman-draharahany, anatin’ny trano na ivelany, amin’ny lalam-bahoaka na anaty tanàna mitokana, zavatra na fitaovana isan-karazany, mety hiteraka feo na hovitra mafy sy fanakorontanana ny fialàna sasatra na ny filaminantsain’ny mpiara-monina, dia tsy maintsy manajanona izany asa izany anelanelan’ny amin’ny sivy (9) ora alina hatramin’ny dimy (5) ora maraina sy ny tontolo andron’ny alahady sy ny andro tsy fiasana raha tsy noho ny firotsahana an-tsehatra vokatry ny amehana.
ANDININY 75: Misy alalana manokana noho ny fangatahana manana antony mazava ilàna izany omen’ny Sampan-draharaha monisipaly, raha hita fa ilaina ny fampiasana ireo fitaovana voalaza ivelan’ny ora sy andro nahazoana alalana voalazan’ny andininy faha 74 etsy ambony.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fanariana avy amin’ny orinasa sy toeram-pitsaboana rano maloto tsy nandalo fikajiana mialoha, fanariana ranon-tsolika
20, 87 sy 92
ANDININY 20: Ireo rano avy amin’ny orinasa mpanodina sy ny toeram-pitsaboana dia tsy azo arina mihitsy ao anaty tatatra. Ny fanariana ireo dia amin’ny alalan’ny lakandrano na entina mivantana eny amin’ny fantsona. Tokony handalo fikajiana mialoha mifanaraka amin’ny karazany ireny ary tsy tokony hihoatra ny 30° ny hafanany.
Amin’ny lafiny rehetra, ny fanariana na fandefasana ny faika rehetra avy amin’ny orinasa mpanodina dia tsy maintsy manaraka ny toromarika voarakitra ao amin’ny tondrozotran’ny fiantraikan’ny asa sahanin’ny orinasa.
Voarara tanteraka ny fanipazana ranon-tsolika eny amin’ny fantsona fanarian-drano.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 9 andl 4, 15 andl 2, 20, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Fanariana amany, fako mivaingana avy amin’ny orinasa, hopitaly…
Fitanana an-tsoratra ny fandikan-dalàna, fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana mpandray izany, Fanerena ho amin’ny fanadiovana avy hatrany.
Fanadiovana avy hatrany ny loto izay natao.
Sazy ara-bola AR 50.00
16, 87 sy 89
ANDININY 16: Ny fanariana fotaka, fako mivaingana, amany na diky ary amin’ny ankapobeny ireo vongana na zavatra mafy, ohatra biriky, fanitso, tavoahangy, vy, vatokely, fatin’entana, tapa-bozaka, fakofakon-jaridaina na voninkazo avy amin’ny fikojana, kodiarana tonta, baoritra, taratasy, fako azo avy amin’ny fanatanterahana asam-barotra, ny poti-javatra avy amin’ny toeram-pitsaboana, toeram-panodinana, ny poti-javatra mety hanimba ny fahasalamana, any anaty fanariam-pako iombonana dia voarara.
Ireo zavatra ireo dia taterin’ny tompony na ny orinasa any amin’ny fitobiam-pako, na mety ho ny sampan-draharaha misahana ny fanadiovana ka ndoavana vola. Raràna ihany koa ny manipy eny amin’ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy toy ny sisin-dalana, ny lakan-drano ary ny fantsona fanarian-drano maloto , ireo rano tsy ara-pahasalamana, fako, fotaka, fako avy any an-tokantrano, diky, fakon-dakozia ary ireo zavatra hafa rehetra mety hiteraka fanimbana, na fanelingelenana ny fikorianan’ny ranon’orana, na ny fifamoivozana ka hanimba ny fahadiovana na ny filamin-bahoaka.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1, sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1,57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy fandraisana fepetra mba hisorohana ny korontana mafy miverimberina ataon’ny biby, indrindra ny alika
79, 87 sy 89
ANDININY 79: Ireo tompony sy mpiompy biby, indridra ny alika dia tsy maintsy mandray ny fepetra manokana rehetra mba hisorohana ny fanelingelenana ny manodidina, amin’ny fampiasana ny fomba rehetra hanerena ireo biby tsy hikorontana miverimberina sy mafy, toy ny fehivava, fanofanana, indrindra koa ny fampidirana azy an-trano raha hiala ny tranom-ponenana ny tompony.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fiompiana biby mihoatra ny folo tsy nahazoana alalana, miteraka fofona, tabataba,…
Fisintonana ny fahazoan-dalana
25, 87 sy 90
ANDININY 25: ny fiompiana akoho amam-borona mihoata ny 10, kisoa, soavaly, omby, ondry dia voarara anatain’ny faritra rehetra amin’ny Komina Antananarivo renivohitra raha tsy nahazoana alalana manokana avy amin’ny Ben’ny tanàna taorian’ny nametrahana fangatahana an-tsoratra ataon’ny tompony. Ny fahazoan-dalana no mamaritra ireo fepetra aara-teknika, indrindra ny elanelana tokony ho hajaina amin’ny trano hafa sy ny andraikitra ara-pahasalamana sy ny filaminam-bahoaka ary tokony hifanaraka amin’ireo didy amam-pitsikpika manankery, indrindra fa ireo izay navoakan’ny prefektiora. Ny fiovan-toerana rehetra sy ny fiorenana vaovao rehetra amin’ny taona diavina dia tsy maintsy hanaovana filazana ao anatin’ny iray volana.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Firenirenen’ny biby fiompy
27, 87 sy 89
ANDININY 27: Ny firenirenen’ny biby fiompy dia voarara eto amin’ny fari-piadidian’ny Tanànan’Antananarivo sy sokajiana ho mpirenireny ireo biby tsy misy mpiahy sy ireo tsy arahin’ny tompony.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2,10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy fanajana ny fahazoan-dalana amin’ny fanaovana Karaoke
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Famindrana ny raharaha eo anivon’ny prefektiora.
76, 87 sy 92
ANDININY 76: Ireo tompon’ny trano fanaovana Karaoke dia tsy maintsy manaja izay voalazan’ny fahazoan-dalana toy ny ora fisokafana. Tsy maintsy hajaina ihany koa ny fepetra ny amin’ny fanorenana mikasika ny fahadiovana sy ny tsy fivoahan’ny feo mba itandroana ny filaminam-bahoaka sy ny fahasalamana.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 9 andl 4, 15 andl 2, 20, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana say sokajy fahadimy.
Fametahana peta-drindrina tsy nahazoana alalana
Fitanana an-tsoratra,Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, Fanesorana avy hatrany ireo peta-drindrina fanagiazana ny peta-drindrina mbola tsy voapetaka.
Sazy ara-bola 300.000
32, 87 sy 90
ANDININY 32: Voarara ny fametahana peta-drindrina sy sora-baventy (banderole), marika famantarana ary tsatoby natokana ho an’ny dokavarotra, tsy nahazoana alalana avy amin’ny Komina sy ivelan’ny toerana natokana ho amin’izany. Ny tompon’ireo fitanty dokavarotra ireo dia tsy maintsy mamerina amin’ny endriny teo aloha ny toerana aorian’ny fe-potoana voatondron’ny fahazoan-dalana.
Ny fandikana ity fepetra ity dia miteraka ny fandrovitana avy hatrany ary tsy anarahana fombafomba hafa ankoatra ny fanamelohana ireo nanao izany mba handoa sazy vonodina sy ny fanagiazana ireo taratasy hafa tsy mbola voapetaka.
Ny fanesorana ny marika famantarana sy ireo fitanty dokavarotra dia atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny lalàna manankery sy arahan’ny fanefana sazy ara-bola sokajy fahadimy.
Fanesorana ny marika famantarana sy fitanty dokavarotra sy marika tsy misy fahazoan-dalana
Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny say ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
Ar 5.000.000 isaky ny fitanty dokavarotra esorina.
32 andl 3, 87 sy 92
ANDININY 32 andl 3: Ny fanesorana ny marika famantarana sy ireo fitanty dokavarotra dia atao mifanaraka amin’izay voalazan’ny lalàna manankery sy arahana fanefana sazy ara-bola sokajy fahadimy isaky ny fitanty dokavarotra na marika famantarana tsy manara-dalàna iray.
ANDININY 92: Ny tsy fanajana ireo fepetra voalazan’ny andininy faha 9 andl 4, 15 andl 2, 32 andl 3, 33 andl 5, 54 andl 2, 62, 63, 76 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy sokajy fahadimy.
Manelingelina noho ny hamafiny amin’ny fanamboarana motera, fanaovana dokavarotra amin’ny hira, fandefasana fandraisam-peo na fanamafisam-peo, dokavarotra manohintohina ny rafi-pisainana
72, 87 sy 89
ANDININY 72: Raràna ireo feo manelingelina noho ny hamafiny, eny amin’ny lalam-bahoaka sy toeram-bahoaka na natao ho an’ny rehetra, indrindra ireo mety ho avy amin’ny :
1-Fanamboarana na fandaminana ny ao amin’ny motera, ankoatra ny fanamboarana mandritra ny fotoana fohy hamerenana ny fampandehanana ny fiara iray tsy afa-nihetsika noho ny fahasimbana tampoka teny am-pandehanana;
2-Ireo dokavarotra amin’ny antso na amin’ny hira;
3-Ireo dokavarotra izay mitondra fanohintohinana ny rafi-pisainana sy ny fomba amam-panao;
4-Fampiasana fitaovana sy fomba fampitàna feo amin’ny fanamafisam-peo, toy ny vata fandraisana onjam-peo, fandraisam-peo sy fandefasana kapila, raha tsy hoe ampiasaina manokana amin’ireo fitaovana ireo ny fihainoana mivantana.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1,16, 19, 22, 27,31, 33, 34, 35, 36,38,42,43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fitaterana olona mararin’ny areti-mifindra amin’ny fiara tsy natokana ho amin’izany
48, 87 sy 89
ANDININY 48: Fiara voatokana avy amin’ny sampan-draharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka no itaterana ny marary voan’ny areti-mifindra ary tsy maintsy fendrahana ranom-panafody mamono otrik’aretina ny fiara raha vantany vao vita ny fanaterana ilay marary.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ny fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42,43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fanajanonana fiara eny an-dalambe, maharitra, tsy anaty faritra nahazoana alalana avy amin’ny Komina
Fampitandremana am-bava mba hanala izany, Firosoana amin’ny fanasaziana, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola mifanaraka amin’ny fandikan-dalàna eny min’ny toerana voatondro.
68, 87 sy 90
ANDININY 68: Ireo lalam-bahoaka sy ny miankina aminy dia tsy azo ampiasaina ho an’ny tombotsoa manokana, toy ny trano garazy, fivarotana zavatra tonta na hilalaovana( babyfoot, billard), fanahazam-bary, fivarotana fasika sy vatokely ary ihany koa ny fivarotana ireo fitaovana fanamboarana trano ka iharan’ny fandraofana ho an’ny tombotsoan’ny Komina raha toa ny sandan’ny entana nalain’ny Komina ka ambanin’ny sazy voafaritry ny andininy faha sivifolo (90). Amin’ny tranga mifanohitra amin’izany, ny mpandika lalàna dia didiana handoa ny sazy mifanaraka amin’izay voalazan’ny didy amam-pitsipika manankery.
Ny fanasana fiarakodia rehetra sy ny hafa eny amin’ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy dia voarara.
Voarara ihany koa ny mijanona na manajanona fiarakodia simba na mandeha, na toy inona toetrany na toy inona, amin’ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy. Ny tompony na ilay nitondra dia tsy maitsy manala izany amin’ny fampitandremana voalohany ataon’ny iraka manao fanamariana, raha tsy izany dia hafindra any ambalatsazin’ny Komina Antananarivo Renivohitra ilay fiarakodia ka ny tompony na ilay nitondra no mando ny lany rehetra amin’izany.
Ireo fiarakodia nogiazana dia tsy miverina amin’ny tompony ara-dalàna raha tsy aorian’ny fandovana vola lany rehetra ary ny sazy ara-panjakana.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fanaovana zavatra manohintohina ny fifamoivozana na ny mpandeha an-tongotra
Fampitandremana am-bava, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
57, 87 sy 89
ANDININY 57: Voarara tanteraka ny manelingelina ny lalana sy ireo miankina aminy, sy manakorontana ny filaminam-bahoaka sy ny firindran’ny fifamoivozana.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33
Fanelingelenana ny fifamoivozana amin’ny fametrahana fitaovana na fanaovana asa amin’ny lalam-bahoaka
Fidinana ifotony, Fampitandremana miampy fandravana, Tatitra ataon’ny Teknisiana, Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
62, 78 sy 92
ANDININY 62: Voarara tanteraka ny fanaovana fanorenana rehetra manamorona ny lalambahoaka sy ny lalana voatokana ka mety
Asa fangatahana arahana zaza tsy ampy taona na mampitahotra ny olona angatahany
Fampitandremana am-bava, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro, raha mbola tratra mamerina.
83, 87 sy 88
ANDININY 83: Ireo olona rehetra manao ny asa fangatahana amin’ny enriny rehetra dia tokony tsy hanakorontana ny mpandeha an-tongotra sy ny mpamily fiarakodia. Izy ireo dia tsy tokony harahina biby masiaka na mety hasiaka, ary tsy tokony hampideradera fitaovana isan-karazany mba hampitahorana ireo olona angatahany.
Voarara tanteraka ny mangataka miaraka amin’ny zaza tsy ampy taona.
ANDININY 88: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 14, 68 andl 2, 69, 83 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy voalohany taorian’ny fampitandremana am-bava hiala avy hatrany amin’ny toerana na hanajanona ny tsy fanarahan-dalàna.
Fanakorontanana amin’ny atoandro sy alina ataon’ireo mpitondra fiarakodia
85, 87 sy 90
ANDININY 85: Ny fanakorontanana amin’ny alina dia voarara; toy izany koa ny fanakorontanana amin’ny atoandro tsy misy antony voamarina ho ara-drainy. Voasokajy ho fanakorontanana amin’ny atoandro ireo kipantson’ny mpitondra fiarakodia tsy misy antony ara-drariny, ny hiaky ny mpanampin’ny mpamily hiantsoana mpandeha.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Tsy fanariana ny fako amin’ny ora voatondro: 4 ora hariva hatramin’ny 8 ora alina
14, 87 sy 88
ANDININY 14: Ny fako dia tsy maintsy ho entina isan’andro ivelan’ny toeram-ponenana ary apetraka any anatin’ny toerana voatokana ho amin’izany amin’ny 4 ora hariva hatramin’ny 8 ora alina. Ny tsy fanarahann’ny rehetra ireo ora voatondro ireo dia andoavana sazy vonodina.
ANDININY 88: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 14, 68 andl 2, 69, 83 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy voalohany taorian’ny fampitandremana am-bava hiala avy hatrany amin’ny toerana na hanajanona ny tsy fanarahan-dalàna.
Fanariana fotaka, fako mivaingana anaty fanariam-pako ho an’ny besinimaro:diky, tapabiriky, ranontany,…
Fitanana an-tsoratra ny fandikan-dalàna. Fandidiana hanefa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana mpandray izany, Fanerena ho amin’ny fanadiovana avy hatrany.
Fanadiovana avy hatrany ny loto izay natao. Sazy ara-bola Ar 50.000
ANDININY 16: Ny fanariana fotaka, fako mivaingana, amany na diky ary amin’ny ankapobeny ireo vongana na zavatra mafy,ohatra biriky, fanitso, tavoahangy, vy, vatokely, fatin’entana, tapa-bozaka, fakofakon-jaridaina na voninkazo avy amin’ny fikojana, kodiarana tonta, baoritra, taratasy, fakon azo amy amin’ny fanatanterahana asam-barotra, ny poti-javatra avy amin’ny toeram-pitsaboana, toeram-panodinana, ny poti-javatra mety hanimba ny fahasalamana, any anaty fanariam-pako ikambanana dia voarara.
Ireo zavatra ireo dia taterin’ny tompony na ny orinasa any amin’ny fitobiam-pako, na mety ho ny sampan-draharaha misahana ny fanadiovana ka andoavana vola. Rarana ihany koa ny manipy eny amin’ny lalam-bahoaka sy ireo miankina aminy toy ny sisin-dalana, ny lakan-drano ary ny fantsona fanarian-drano maloto, ireo tsy ara-pahasalamana, fako, fotaka avy any an-tokantrano, diky, fakon-dakozia ary ireo zavatra hafa rehetra mety hiteraka fanimbana, na fanelingelenanana ny fikorianan’ny ranonorana, na ny fifamoivozana ka hanimba ny fahadiovana na ny filaminam-bahoaka.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1, sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy fananana toeram-pivoahana ho an’ireo trano fonenana sy trano ampiasain’ny besinimaro
Fidinana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
10, 87 sy 89
ANDININY 10: Ny trano fonenana na trano ampiasain’ny besinimaro dia tsy maintsy manana toeram-pivoahana. Ireo trano fivoahana ivelan’ny trano fonenana dia tsy azo atao latsaky ny 3 metatra miala ny sisin-dalam-bahoaka na ny faritry ny tanàna mifanila. Tsy maintsy ezahana ny fikojana ny fantsarana azy hatrany ary ny fahadiovany.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalzan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokaky faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Fanorenana lavapiringa latsaky ny 3m miala ny sisin-dalam-bahoaka na ny faritry ny tanàna mifanila
Fampiasana lavapiringa mandrapahafenony sy fanalàna maloto ami’ny atoandro tsy nahazoana alalana amin’ny Komina
11, 87 sy 89
ANDININY 11: Tena voarara ny mampiasa lavapiringa mandrapahafenony tanteraka. Ny fanalàna maloto amin’ny lavapiringa dia tsy azo atao raha tsy nahazoana alalana tamin’ny Komina Renivohitra taorian’ny nametrahana fangatahana iray volana alohan’ny hanatanterahana izany. Ny fanatanterahana izany dia tsy maintsy atao amin’ny alina hafa tsy ireo mpanala maloto matihanina izay mampiasa fitaovana voatokana ho amin’izany.
Raha olona no mitaona, dia halevina amin’ny toerana tsy mihoatra ny faritry ny tanànany izany.
Fampiasana ny toeram-pantsakana iombonana hanasana fitaovan-dakozia, isasana, anasana lamba, fiara, …
Fitanana an-tsoratra, Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
23, 87 sy 90
ANDININY 23: Ireo mpampiasa sy tomponandraikitra ny toeram-pantsakana dia tsy maintsy mandray fepetra mba tsy hisian’ny fiandronan’ny rano amin’ny manodidina mivantana ny fantsakana.
Voarara ny fampiasana ny fantsakam-bahoaka ankoatra ny famatsiana rano fisotro madio, indrindra ny fanasana lamba, ny fanasana fitaovan-dankozia, ny misasa, ny fanasana fiarakodia, ary voarara ihany koa ny fampidirana diky na akora hafa mety handoto ny loharano izay mamatsy ny rehetra.
ANDININY 90: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Fandotoana ny rano fisotro amin’ny fanariana fatim-biby, ny sisa avy amin’ny fivarotan-kena, zezika, diky
24, 87 sy 90
ANDININY 24: Voarara ny manary ireo fatim-biby, ireo sisa avy amin’ny fivarotan-kena, zezika avy amin’ny karazam-biby, na diky hafa, amin’ny ankapobeny dia ny sisam-biby mora lo anaty lavaka, ka mety handoto ny rano natao hosotroana.
Fandevenana am-pasandrazana olona matin’ny pesta na Kolerà
52, 87 , 90
ANDININY 52: Ireo olona matin’ny pesta na kolerà dia tsy azo alen=vina any amin’ny fasandrazany. Ny fandevenana dia taoa eny amin’ny fasan’ny Komina voatokana ho amin’izany.
Famadihana olona matin’ny pesta na kolerà latsaky ny fito taona
53, 87, 91
ANDININY 53: Ny fakana sy famindran-toerana ny razna matin’ny pesta na kolerà dia tsy azo atao raha tsy afaka 7 taona ary tsy maintsy nahazoana alalana avy amin’ny ambaratonga mahefa.
ANDININY 91: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 53, 56 andl 2, 80, 81, 82 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandovana sazy sokajy fahaefatra.
Tsy fandraisana fepetra amin’ny fiparitahan’ny feo avy amin’ny zava-maneno
Fitsirihana ifotony, Fampitandremana, Tatitra an-tsoratra,Fandidiana handoa ny sazy ara-bola eny amin’ny toerana voatondro.
78, 87 sy 89
ANDININY 78:Ireo mponina amin’ny toeram-ponenana sy ny miankina aminy dia tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra mba tsy ho voakorontan’ny feo avy amin’ny tranony ireo mpiara-monina manodidina, toy ny vata famoaham-peo, firaiketam-peo; fitaovana fandrenesam-peo sy fahitalavitra, zava-maneno, fitaovana maneno an-tokantrano sy ireo feo ateraky ny fanaovana kiraro mafy faladia na fanatanterahana asa na kilalao tsy mifanaraka amin’ireo trano ireo.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1; 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Tsy fanajana ny fenitra mba tsy hiparitahan’ny feo amin’ny trano
Sazy ara-bola 1.000.000
80, 81, 87 sy 91
ANDININY 80: Ny singa sy fampitaovana amin’ny trano dia tokony hotazonina amin’ny hatsarany mba tsy hisian’ny fiharatsian’ny fahafaham-pitazomam-peo rehefa mandeha ny taona, io tanjona io koa dia tokony hampiharina amin’ny fanoloana azy.
ANDININY 81: Ny fepetra rehetra dia tokony raisina mba hamerana ny korontana mandritra ny fametrahana amin’ny fitaovana vaovao an’olon-tokana na itambarana.
Ireo fepetra ireo dia hampiharin’ny sampan-draharaha sy fikambanana mahefa araka ny fenitra NFS 31.057 mikasika ny fanamarinana ny kalitao ara-peon’ny trano.
ANDININY 91: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 2, 53, 56 andl 2, 53, 56 andl 2, 80, 81, 82 amin’ity didim-pitondrana ity dia mitarika fandoavana sazy sikajy fahaefatra.
Tsy fanajana ny ora fampiasana fitaovana fanaovan-jaridaina sy fitaovana hafa miteraka feo
77, 87 sy 89
ANDININY 77: Ireo asa fanamboarana na fanaovan-jaridaina ataon’ireo olona manokana amin’ny alalan’ny zavatra na fitaovana mety hiteraka fanelingelenana ny manodidina noho ny hamafin’ny feo, toy ny fanapahana ahitra misy motera, fanapahana , fandavahana, fikikifana na fanapahana mekanika dia tsy azo atao afa-tsy:
-amin’ireo andro fiasana amin’ny 8ora 30 hatramin’ny 12 ora sy amin’ny 1 ora 30 hatramin’ny 7 ora 30 hariva.
-amin’ny Sabotsy amin’ny 9 ora hatramin’ny 12 ora sy amin’ny 2 ora hatramin’ny 5 ora hariva.
ANDININY 89: Ny tsy fanarahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 9 andl 1 sy andl 2, 10, 11, 15 andl 1, 16, 19, 22, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 48, 54 andl 1, 57, 72, 77, 78, 79 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandoavana sazy sokajy faharoa, arahana fandraofana ireo entana tsy ara-dalàna ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana ara-panjakana, aorian’ny fampitandremana hanara-dalàna tsy nahitam-bokatra.
Famotehana fananan’olona, fihanihana andrinjiro, tamboho, rindrina, fampiasana famantaranoram-bahoaka, famaritana ny lalana amin’ny loko, fandrebirebena hanadalàna olona
84, 87 sy 90
ANDININY 84: Voarara ny:
-Mamotika na manimba ny fananan’olon-kafa mihetsika na mitoetra;
-Mihanika amin’ny lafin-drindrina, amin’ny andrinjiro, fitaovam-panazavana na fitaovan-dRenivohitra hafa sy ny mihanika ny rindrina ary tamboho;
-Mampiasa ireo familiana ny fantsona na lalan-drano isan-karazany, ny famataranandrom-bahoaka, ireo fitaovana fanoroana ary ny fanazavana ny lalam-bahoaka;
-Mamaritra marika na soratra amin’ny lalana sy ny sisn-dalana amin’ny alalan’ny akora samihafa;
-Mampameno lakolosy na mandondona amin’ny varavarana mba hanadalàna ireo izay monina ao.
ANDININY 90: Ny tsy fanrahana ireo fepetra voalazan’ny andininy 21, 23, 24, 25, 32, 39, 52, 55, 56 andl 1, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 84, 85, 86 amin’ity didim-pitondrana ity dia miteraka fandovana sazy sokajy fahatelo, arahana fandraofana ny entana tsy ara-dalàna ara-panjakana.
Ireo sazy vonodina
ANDININY 87: Ireo sazy vonodina voalazan’ity Fehezam-pitsipika ity dia sokajina ho dimy karazana:
Sokajy voalohany: Ar 5.000,00
Sokajy faharoa : Ar 50.000,00
Sokajy fahatelo: Ar 300.000,00
Sokajy fahaefatra: Ar 1.000.000,00
Sokajy fahadimy: Ar 5.000.000,00
FAHAZOAN-DALANA AORIAN’NY FANDOVAN-TSAZY:
Rhefa tontosa ny fandoavan-tsazy vonodina dia azo atao ny mangataka fahazoan-dalana amin’ny Komina Antananarivo Renivohitra raha mahakasika ireo andinin-dalàna manaraka ireto ny fandikan-dalàna: 10, 15, 25, 32, 33, 44, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 76, 82
Ny mpitsirika ifotony avy amin’ny Komina dia manamarina ny fahafenoan’ny fepetra takina ho amin’ny fahazoan-dalana.